हामीलाई कम्जोर नआँक्नु, क्रान्ति कहिलै कम्जोर हुँदैन – विप्लब « Postpati – News For All
हामीलाई कम्जोर नआँक्नु, क्रान्ति कहिलै कम्जोर हुँदैन – विप्लब
२५औं जनयुद्द दिबशको अबसरमा प्रतिबन्धित नेकपाका महासचिव नेत्र बिक्रम चन्द ‘बिप्लव’ले समसामयिक राजनीतिक बिषयमा आफ्नो धारणा सार्बजानिक गरेका छन् । रातोखबरमा अन्तर्वार्ता दिंदै आफ्नो पार्टी कम्जोर नभएको प्ररिक्रिया दिएका छन् ।
जनतालाई हराइएपछि जनअधिकार र राष्ट्रियता निकै कमजोर बिन्दुमा पुगेका छन् । जनतामाथि फासिवाद लादिएको छ । केपी वलीको सामाजिक दलाल सरकार झूट्टा मुद्दा, व्यापक गिरफ्तारी, ह’त्या–आ’त’ङ्कमा उत्रिएको छ । केपी सरकार देशलाई बेचेर खाने, द’लाली गर्ने र कुर्सी बचाउने अनै’तिक खेलमा लागेको छ । हाम्रो पार्टीले सबै मोर्चामा प्रतिरोध गरिरहेको छ । जनताले सत्य बुझ्दै गएका छन् र प्रतिरोध शक्तिशाली बन्दै गएको छ ।
पार्टी नेताहरूको ह’त्या, गि’रफ्तारी, जेलनेलले कतिको समस्या पारेको छ ? क्षति हेर्दा कठिनाइ परेको हो कि भन्ने पनि अनुमान गरिन्छ बाहिर ?
हो, प्रतिबन्धपछि हाम्रोतर्फ केही गम्भीर क्षति भए । कमरेड कुमार पौडेल, कमरेड महान, कमरेड नीरकुमारलगायत एक दर्जन नेता–कार्यकर्ता, कमान्डर र सदस्यहरूको स’हा’दत भएको छ । केन्द्रीय नेताहरू कमरेड सुदर्शन, कमरेड वीरजङ्ग, शिलु, रणवीर, आदर्श, माइला, प्रज्वलन, हितमान, सुवास, बन्धु, दीपेशलगायत पार्टीका सयौँजना कमरेडहरू हिरासत र जेलमा हुनुहुन्छ । तर हामीले आफूलाई समाल्दै, सुदृढ गर्दै र रूपान्तरण गर्दै एकीकृत जनक्रान्तिलाई माथि उठाउँदै गएका छाैँ । बलिदान र क्षतिले पार्टीमा केही कठिनाइ स्वाभाविक रूपमा आउँछन् तर बलिदान र क्षतिले पार्टीलाई खार्ने र ऊर्जा भर्ने काम पनि गर्दछन् । हाम्रो विजयलाई कसैले पनि रोक्न सक्नेछैन ।
हो, केही कमरेडहरू एउटा अवधिसम्म हामीसँग रहे । उनीहरूले एक चरण आ’त्मस’मर्पणवाद, विसर्जनवाद, संशोधनवादका विरुद्ध विद्रोह गरे । त्यसले उनीहरूलाई पनि राम्रै भएको थियो, पार्टीलाई पनि राम्रै गरेको थियो तर क्रान्तिले नयाँ जोड पकड्न थालेपछि उनीहरूको विद्रोहले थेग्न सकेन । उनीहरू सैद्धान्तिक, राजनीतिक, सङ्गठनात्मक विद्रोह गर्नसम्म सक्षम थिए तर सत्ताका विरुद्ध क्रान्ति गर्ने, विद्रोह गर्ने स्तरमा तयार रहेनछन् । उनीहरू तर्सिए, गले र जसका विरुद्ध विद्रोह गरेर क्रान्तिकारी प्रतिष्ठा बनाएका थिए उतै गएर लम्पसार परे । यस्तो प्रवृत्तिबाट कुनै पनि क्रान्ति अपवाद हुनसक्दैन । यसलाई पचाएर नै पार्टीले आफूलाई परिपक्व र अपराजेय बनाउने हो । तर क्रान्तिमा आत्मसमर्पण गर्ने मात्र देखिएनन् अन्य पार्टीबाट विद्रोह गरेर क्रान्तिको मोर्चामा आबद्ध हुन आइपुग्ने कमरेडहरू पनि प्रसस्त छन् । जहाँसम्म पछि फर्किने साथीहरूले गर्ने प्रचार छ त्यसको कुनै तुक छैन । एउटा सपाट र सोझो सत्य के हो भने रत्नपार्क, खुलामञ्च, राष्ट्रिय सभागृहमा भाषण, नाराजुलुस र नाचगान गरेर जनताले राज्यसत्ता प्राप्त गर्न सक्दैनन् । क्रान्ति हाँक्ने कार्य जति गौरवपूर्ण छ त्यत्तिकै चुनौतीपूर्ण पनि छ । चुनौती उठाउन नसक्नेले बढी बोल्नु आफैँलाई दुःख दिनु मात्र हो ।
सर्लाहीका जुझारु नेता कमरेड कुमार पौडेलको मुद्दामा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग र अधिकारवादी संस्थाले ह’त्या’राहरूलाई कारबाही गर्न सरकारलाई दबाब दिइराखेका छन् । यसलाई कसरी लिनुभएको छ ?
कमरेड कुमार पौडेललाई सीधा सर्बेन्द्र खनालको आदेशमा इन्स्पेक्टर कृष्णदेव साहको टोलीले योजनाबद्ध रूपले गोली हानी ह’त्या गरेको हो भन्ने त छ्याङ्छ्याङ्ती देखिसकियो । मानवधिकारवाद आयोग र अधिकारवादी संस्थाले समेत उनीहरूलाई नियन्त्रणमा लिएर कारबाही गर भनिसके । यस हदसम्म मानवअधिकार आयोग र संस्थालाई धन्यवाद नै दिनुपर्छ । तर ह’त्याका पछाडि दुईखाले अनुहार छन् : एउटा कृष्णदेव साहहरूको ह’त्या’रो अनुहार, अर्को भित्र बसेर पुलिसलाई गो’ली हा’न्ने योजना बनाउने र उक्साउने योजनकारहरूको अनुहार । हामीसँग तथ्यहरू आइरहेका छन् । यिनीहरूलाई कारबाही हुनुपर्छ ।